ShareTani waa 50% ee Codsi Weyn | Martech Zone
ShareTani waa 50% ee Codsi Weyn
Khamiista, Diseembar 31, 2009 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Goorma ShareThis bilaabay, Waan ku faraxsanahay inaan ka saaro liiska astaamaha fayraska ee aan ku lahaa goobta oo aan ku beddelo hal badhan oo fudud. Dhibaatadu waxay tahay in badhanka uu ahaa mid si xun u fashilmay boggeyga. Qoraalada ay ku qornaayeen boqolaalka gudbinta iyo kumanaan xusaya ee ku baahsan baraha bulshada, ShareThis waxaa loo adeegsaday in ka yar toban jeer!
Dhibaatada ShareThis waa taas ma fududaan akhristaha.
Aynu nidhaahno, tusaale ahaan, akhristaha wuxuu doonayaa inuu la wadaago sheeko ay ka heleen barta Twitter-ka.
Waxay ka jiiriyaan xiriirka ShareThis.
Waa inay gujiyaan Twitter.
Waa inay bixiyaan soo galitaan.
Waa inay bixiyaan lambar sir ah
Waa inay gujiyaan post.
Talaabooyin aad u tiro badan. Tallaabooyin aad u tiro badan.
Waxaan sheegayaa in ShareThis ay tahay 50% maxaa yeelay waxay fiiro gaar ah u yeeshaan khibrada daabacaha mana ahan feejignaan ku filan khibrada isticmaaleyaasha. Tani waxay leedahay suurtagalnimada inay noqoto codsi weyn haddii ay sameeyaan hal shey oo fudud - u fududee wadaag.
Sanduuq -wadaag wuxuu ahaa ku dar muuqaal wanaagsan - adeegsadayaashu hadda way eegi karaan walxaha ay wadaageen. Kuma filna, in kastoo.
Isticmaal ahaan, waa inaan awood u yeesho inaan galo ShareThis mar oo waxaan sameeyay shabakadaha bulshada mar. Markii aan booqdo degel kale… Waa inaan horeyba u galayaa ShareThis sidaa darteed si fudud ayaan u riixi karaa batoon si aan ugu gudbiyo Twitter, Facebook, ama shabakad kale (sida badan Tweetmeme wuxuu u sameeyaa Twitter). Wax qorid ah kama jiraan filling ma buuxinayaan faahfaahinta (haddii aysan ikhtiyaar ahayn)) kaliya wadaag!
Waxaan rajeynayaa inaan arko sida ShareThis ay isu beddesho 2010. Waxaan halkaan ku hayaa barta maxaa yeelay waxay bixisaa xoogaa qiime ah Awooddu way badan tahay, inkasta oo ay badan tahay.
Copernicus ama Aristotle ma Maamulaan Ganacsigaaga?
5 Fure u ah Blogging B2B